February 2021 - ApannPyay Media
ငြိမ်းချမ်းစွာပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အန္တရယ်ကြားမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေတဲ့ ဦးခင်လှိုင်
February 28, 2021 by ApannPyay Media
ငြိမ်းချမ်းစွာပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အန္တရယ်ကြားမှာ တစ်သားတည်းရပ်တည်ပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေတဲ့ ဦးခင်လှိုင် မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစွမ်းကုန်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာကို အားလုံးလည်းသိမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်…..။ အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေအတွင်းမှာ အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တာမလို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပရိသတ်တွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပြီး ဦးခင်လှိုင်တစ်ယောက်လည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာအခုဆိုရင် ၂၈ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေများစွာ ရှိနေတာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ သိမြင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်…..။ အခုလို အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကြားကနေ ဦးခင်လှိုင်ဟာ အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံရှေ့မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဦးခင်လှိုင်ဟာ သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “ဒီနေ့… သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံအရှေ့….” … Read more
February 24, 2021 by ApannPyay Media
Solar ျပား ႏွင့္ ခ်ည္မ်ဥ္ကဲ့သို သတၱဴ Antenna ႏွင့္ Microchip ပါရွိပါသည့္ သိန္းငွက္တစ္ေကာင္ေတြ့ရွိ (ရုပ္သံ) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ လိန္ေတာေက်းရြာအုပ္စု ဂုဏ္တန္ေက်းရြာ ကိုဝင္းေဇာ္ေထြး မွ ယေန႔ ၂၃.၂.၂၀၂၁ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေတြ႕ရွိရေသာ သိန္းငွက္ အား ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန သို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံ ၍ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ‌ျပန္လည္ေပးအပ္ပါသည္။သိန္းငွက္သည္ ေသးငယ္ေသာမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစားမွာေခါင္းမွ အၿမီးဆုံးထိ ၁ ေပ ၆ လက္မအေတာင္ပံ ျဖန႔္ အစအဆုံး ၂ ေပအျမင့္ ( ေျခေထာက္ေထာက္လၽွက္ ) ၁ ေပသာရွိပါသည္။ သိန္းငွက္ေက်ာေပၚ၌ ၁ လက္မပတ္လည္ ခန႔္ရွိေသာ … Read more
February 21, 2021 by ApannPyay Media
အခုလို အချိန်အခါမျိုးမှာ ကမ္ဘာကတောင် သိသွားတဲ့ သမီးလေး စိတ်ထားဖြူတဲ့ကလေးဒီကလေးမလေး(ဖရဲသီးစိတ်ရောင်းတဲ့ကလေး)ကျွန်တော်မလေးစားဘဲမနေနိုင်တော့ဘူး ကမ္ဘာကသိသွားတဲ့ ဓနုဖြူကစေတနာရှင်မလေး (၁၈-၂-၂၀၂၁)ကြာသာပတေးနေ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ(၁၂)ရက်မြောက်နေ့ စိတ်ထားဖြူတဲ့ကလေးဒီကလေးမလေး(ဖရဲသီးစိတ်ရောင်းတဲ့ကလေး)ကျွန်တော်မလေးစားဘဲမနေနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကကြိုပွိုင့်သွားတယ် သူ့ရှေ့ရောက်တော့အမောပြေဝယ်စားမလို့ “သမီး တစ်စိတ်ဘယ်လောက်လဲ””တစ်စိတ် (၂၀၀ )သုံးစိတ် (၅၀၀) ပါဦးဦး” “အေး အဲဒါဆို (၅၀၀ )ဖိုးထည့်””ရော့ ရပြီ ဦးဦး မပေးနဲ့ စားသွားနော် ဖြစ်နိုင်ရင်အခုဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို သမီးက ကျွေးချင်တာ” အရင်းမရှိတော့ရင် အမေဆူမှာစိုးလို့””သမီး အရင်းက ဘယ်လောက်မို့လဲ” “သိဘူး အမေ ကဖရဲသီးတစ်လုံးဝယ်ပြီးစိတ်ပေးလိုက်တာ” ခန့်မှန်းပြီးအစိတ်‌ရေကြည့်လိုက်တော့ ကာလပေါက်ဈေး (၃၅၀၀/၄၀၀၀) “သမီးတစ်ဗန်းလုံးဦးဝယ်မယ် (၅၀၀၀) ထား” “အာ့လောက်အမြတ် သမီးမယူပါဘူး အရင်းဘဲပေး” “အရင်းက (၂၈၀၀ )ထဲ သမီးအမြတ်လှူပါ့မယ်” (နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရတဲ့ကလေးကသူ့အမြတ်ကိုလှူမှာတဲ့ဗျာ ကျွန်တော်အံ့ဩဆွံ့အသွားတယ်) “အေးသမီး အဲဒါဆို ဦးပေးမယ် သမီးလှူချင်တဲ့ဒါနမြောက်အောင် အခုဝေပေးလိုက်တော့” … Read more
မျက်စိရောဂါအတွက် တိုင်းရင်းဆေး အသက်ခုနစ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် မျက်စိပေကလတ်ပေကလတ် ဖြစ်နေသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် ပါလာသော ဂိမ်းကစားနည်းများကို နေ့စဉ်ငါးနာရီထက် ပိုပြီးကစားရာမှ မျက်စိအဖွင့်၊ အပိတ်ကို ထိန်းချုပ်သော အာရုံကြောများ အားနည်းလာပြီး ပေကလတ်ပေကလတ် ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ငယ်ရွယ်သော ကလေးများကို ဂိမ်းကစားရာတွင် တစ်နာရီအလွန်ဆုံး၊ တစ်နာရီခွဲထက် မပိုအောင် ကန့်သတ်ပေးသင့်သည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မျက်မှန်တပ်ရသော ကလေးများ များလာရခြင်းမှာ ဂိမ်းက စားနည်းများပါသည့် ဟန်းဖုန်းများပါလာပြီး ပိုများလာသည်။ ယနေ့ခေတ်မီတိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများကြောင့် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူ၊ ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ၊ အထူးဖြင့် ကလေး၊ လူပြီးအရွယ်စုံ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲမှု များပြားလာပြီး နေရာတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်လက်ကိုင်ဖုန်းမျက်နှာပြင် လက်ဖြင့်ပွတ်ကာ မျက်စိအာရုံစူးစိုက်နေသူများကို တွေ့ မြင်နေရသည်။ရုံးများ၌ စာရင်းအင်းများပြုလုပ်ရာတွင် ရိုးရိုးစာရင်းကိုင်များထက် ကွန်ပျူတာ စားရင်းကိုင်များကို ပို၍အသုံးပြုလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ … Read more
မြန်မာလူမျိုးတွေကို တသက်လုံး ထည့်လာတဲ့ဂျင်းတွေ ခေတ် ကို က လဖက်ညွှန့် ဆိုပြီးရာ ဘာရွက် အညွှန့်တွေ ကို ချဉ်ငံစပ် လုပ် မပုပ်ဆေးတွေ ထည့် ဆီစိမ် ပုလင်းနဲ့ ပိတ်ပြီး တံဆိပ်ကပ် လိုက်ရင် တစ်ဆယ်သား ၃၀၀ တန် ရာဘာညွှန့်တွေ က တပုလင်း ၆၀၀၀ တန်နာမည်ကြီး လက်ဖက်ညွှန့် တွေ ဖြစ်သွား တဲ့ ဂျင်းခေတ်။ (လဖက်စစ် မစစ်ခွဲချင်ရင် Leave margin entire ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ခွဲ ရ တယ် လဖက် ရွက်အစစ် ရဲ့ အနားသတ်က နှင်းဆီ ရွက် လို အထစ်အထစ်လေးတွေ ပါပြီး ရာဘာရွက်က အနားသတ် ပြောင်ချောနေတယ် ။ လဖက်ပင် … Read more
ကျောင်းဆရာမ အလုပ်ကထွက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုပေးတဲ့ မိန်းမချောလေး ကျောင်းဆရာမ အလုပ်ကထွက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားတွေကို ဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုပေးတဲ့ မိန်းမချောလေး ကျောင်းဆရာမ အလုပ်က ထွက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားတွေအတွက် ဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုပေးတဲ့ မိန်းမချောလေးမရှိဆင်းရဲသားတွေနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ အဘိုးဘွားတွေကို စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာဟာ တကယ်မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ပါနော်။ မိန်းမချောလေး တစ်ယောက်ကလည်း စွန်ပစ်ခံ ဘိုးဘွားတေကို စောင့်ရှောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ထို မိန်းကလေးကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ အင်္ဂပိုလမ်းမကြီးဘေး သီလှကုန်းမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဘဝကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ကျောင်းပြီးတော့ ကျောင်းဆရာမအလုပ်ဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူမရဲ့ ခံယူချက်အရ အလုပ်ကထွက်ပြီးတော့ ခိုလူံရာဂေဟာကို ဟင်္သာတမြို့ လယ်တီကွင်းရပ် အောင်ချမ်းသာဘုန်းကြီးကျောင်းနားမှာ တည်ဆောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီး ပြုစုစောက်ရှောက်သူတွေမဲ့သွားတဲ့သက်ကြီးအဘိုးအဘွားတွေကို ခိုလူံရာဂေဟာမှာ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က … Read more
ညဖက်တွင် လူငယ်များ ရပ်ကွက် ကင်းစောင့်ရန် စီစဉ်နေ အင်းစိန်၊ ဆယ်မို င်ကုန်းမှာ ညပိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် လူငယ်ကင်းအဖွဲ့တွေချထားမည်ဟုဆို စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ညပိုင်းလူဖမ်းပွဲတွေရက်ဆက်ဖြစ်လာတာကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေဟာ စိတ်မလုံခြုံမှုကိုခံစားနေရတာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ဆယ်မိုင်ကုန်းက ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့လူငယ်တွေ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး လူငယ်ကင်းအဖွဲ့တွေ ချထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းထိပ်၊ လမ်းဆုံလမ်းခွတိုင်းမှာ လူငယ်တွေအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ညလုံးပေါက် ကင်းစောင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။DVB …ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကွန်ရက်များ ရပ်ကွက်များတွင်ဖွဲ့စည်း… ရန်ကုန်၊ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက် တောင်ဒဂုံအမတ်ဦးညီညီက အများပြည်သူကို အသိပေးပြောကြားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ “တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိလမ်းများမှာလူငယ်/ရွယ် များအနေဖြင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကွန်ရက်များအားဖွဲ့စည်းနေကြပါပြီ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ – ‌ထောင်ထွက်ခိုးဆိုးလုယက်များနှင့် အချိန်မတော် အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများရန်မှကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ရပ်ကွက်များအနေဖြင့်ဆက်လက်ဖွဲ့သွားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ”လို့ဆိုပါတယ်။ နေကျော်/Myanmar Harp ညဖက္တြင္ လူငယ္မ်ား ရပ္ကြက္ ကင္းေစာင့္ရန္ စီစဥ္ေန အင္းစိန္၊ ဆယ္မို င္ကုန္းမွာ … Read more
နှင်းဆီပန်း တို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်? ကမ္ဘာပေါ်မှာ “နှင်းဆီပန်း” တွေဟာရောင်စုံရှိပါတယ်၊ ဘာကြောင့် အချစ်ရဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့ နှင်းဆီ ပန်းအနီအရောင် ကိုအသုံးချကြတာလဲ ? ဟိုး…ကတည်းက နှင်းဆီပန်းကို အချစ်ရဲ့ သင်္ကေတ အဖြစ် တင်စားခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါဆို…အခြားအရောင်နှင်းဆီပန်းတွေ လက်ခံရရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေ အတွက် ရော အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူးလား ဒါ့ကြောင့်နှင်းဆီပန်းအရောင်တမျိုးဆီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုတွေ ကို Myanmar live ပရိတ်သက် ကြီးအတွက် အထူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နှင်းဆီအနီ (Red Rose) နှင်းဆီပန်းအနီရောင်ကတော့ I Love you ဆိုတဲ့ မင်းကိုငါချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့အညီ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ချစ်သူဆီကသို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်း ဆီက “နှင်းဆီအနီ” လေးတပွင့်လက်ခံရရှိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ဝမ်းသာလိုက်ပါ သူဟာသင့်ကို ချစ်မြတ်နိုး ခြင်းကြောင့် “နှင်းဆီအနီ” လေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်… နှင်းဆီဖြူ (While Rose) နှင်းဆီဖြူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရိုးသားခြင်းကိုဖော်ဆောင်ပြီး … Read more
အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဗေဒင်ပညာရှင် လင်းညို့တာရာ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နှစ်သစ်တစ်ခုမစခင်မှာ နှစ်သစ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများသော အခြင်းအရာများအား ကြိုတင်နိမိတ်ထုတ်လေ့ရှိပါသည်။ ၁။ အချို့သော လက်နက်ကိုင်များဖြင့် ချစ်ကြည်ရေးဖြစ်ပြီး ပြေလည်မှုများ ဖြစ်တတ်သည်။ ၂။ ပြည်တွင်းစစ်များ သိသာစွာ အားနည်းလာတတ်သော်လည်း စီးပွားရေးထိုးစစ်များဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်များ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ၃။ မြန်မာပြည်ကြီး ၏ အမြင့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းများစွာတို့ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်တတ်သည်။ ၄။ ဩဇာအာဏာကြီးမားသော ဆရာတော်ကြီးများ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ သုံးပါး သို့ သုံးယောက် သေဆုံးမှု ဖြစ်မည်။ ၅။ နိုင်ငံတကာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ သတင်းများ ထိုးတက်အောင်ကို အပြောင်းအလဲအဆိုးအကောင်း များစွာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ၆။ တန်ဖိုးကြီး အလွန်ရှားပါးသော ရတနာကြီးတစ်ခု သို့ … Read more